Forum serasera malagasy TABLEAU NUMERIQUE INTERACTIF - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : TABLEAU NUMERIQUE INTERACTIF
vonynive - 27/03/2014 14:22
efa nampiharina tamin'ireo sekoly maromaro eto andrenivohitra ny tableau numérique interactif, efa maro ireo mpanabe no nampanaovina fanofanana ny amin'ny fampiasana azy ity, asa ny any ambanivohitra tsy tongan'ny herin'aratra na efa noheverina ny hampielezana azy io
hery - 31/03/2014 19:13
Ohatry ny ahoana kay izany tableau numerique interactif izany? Mba azo omena sarin'ny zavatra any am-pianaran'ny ankizy ve?
vonynive - 01/04/2014 08:44
karazana tableau tactil
Tibao - 26/05/2014 22:49
Karazana tableau tactile tsy mety lany lakre ... fa mila herinaratra be dia be
vonynive - 27/05/2014 09:14
natao ho an'ny tanan-dehibe ihany ve ny fandrosoana
sitlo - 27/05/2014 19:34
vonynive natao ho an'ny tanan-dehibe ihany ve ny fandrosoana
Tsy voatery hoe fandrosoana io. Maro ny antony na dia resaka fampianarana ihany aza. Raha tena hoe io no tena mampahay dia efa feno an'io angamba ny oniversite amerikanina. Fa sery vitan'anamalahy tsy amonoana vatotr'akoho.
endriny - 28/05/2014 18:11
Rehefa kelikely koa dia hoe tsy mandeha any ampianarana intsony fa video conference. Dia any an-trano no miandry diplaoma.
Mankarary tratra hono ny vovoka tsaoka e...
Ratoa - 19/07/2014 21:15
tsara io ka, saingy lafo be sady mila connexion internet matanjaka sy mandeha tsara. Ny maha tsara azy dia:
1°) tonga dia projeter-na eo ny lesona efa vita anaty ordinateur (tsy manoratra ny votoatin-desona intsony ny mpampianatra)
2°) tsy mila lakre intsony fa na ny rantsa-tanana aza anoratana, dia tonga dia voasoratra eo zay ilaina ho soratana, stilet doux no fampiasa aminy
3°) ny ankizy koa afaka manoratra tahaka izany
4°) tonga dia enregistre-na sur ordinateur izay rehetra natao teo raha tianao.
5°) azo zaraina amin'ny mpianatra avy hatrany (sur clé USB na disque dur externe na via internet) izay nosoratana sy enregistré teo
6°) misy "commande" na touche "del" amafana izay diso na tsy ilaina alohan'ny enregistre-na na sauvegarder-na ny soratra eo.
Fehiny, miha fohy ny fotoana anoratan'ny mpampianatra dia miha lava ny fotoana iofanan'ny mpianatra.
Tsininy: 1°) tsy maintsy manana ordinateur sy mahay mampiasa ordinateur daholo ny mpianatra.
2°) tsy maintsy misy internet matanjaka tsy an-kiato
3°) ny radiations avy amin'ny herimbararatra samihafa
4°) lafo be
Ny enseignement à distance sur plate-forme MOODLE aty aminay mandeha be. Manofana mpampianatra 4 000 isan-taona izahay, sur internet ny cours . Dia misy tuteurs sur place. Tsy manantona ny ENS reo raha tsy rehefa regroupements mandritry ny fotoana fialam-boly
Ratoa - 19/07/2014 21:22
tsy mandika lesona intsony izany ny mpianatra fa tonga dia azo omena copie numérique ; Dia ny enti-mody koa azo hatao version numérique dia tonga dia projeter-na eo.
Any lemaina izao dia efa mianatra amina tablettes sy IPAD ny ankizy sasantsasany, tsy manoratra intsony fa tonga dia alain-tsara na raisina blue tooth sns ny lesona ets...
Nav - 11/08/2014 09:37
Tsara ny manolo-kevitra toy itony fitaovana High Tech itony: tsara ho fantatsika anefa fa eto Madagasikara isika ka tsara ho fantatra inona no vondron'olona (mpianatra+mpampianatra) tilian'ilay olona nanolotra hevitra teto @ forum?
Angamba mpampianatra ianao ary mahalala tsara ny zava-misy momba ny fampianarana eto Madagasikara? Raha ny mpianatra sy ny mpampianatra hotiliana aloha dia tsara avahina ny Ambaratonga Ambony rehetra (Universite sns ...): vitsy an'isa ireto ary mety ho ampy ny toe-bola(?) ka mety azo ampiharina ny tetikasa . . .
Fa manao ahoana ny Ambaratonga II: lycée sy kilasy T6-T9: manao ahoana ny toe-bola, ny elektrisite?
Ary ny Ambaratonga I izay tena maro: sekoly miisa 10000 mihoatra (ny sekolim-panjakana no resahiko): problemana toe-bola sy fisian'ny elektrisite?
Heveriko fa tsara ho faritana mazava tsara ny vondrona hotiliana fa tsy tokony hatao faobe fa mety mamitaka, Inona no fitaovana tena tandrify ny zava-misy eto amintsika? Ahoana ny momba ny boky fianarana ampiasain'ny mpianatra izay heveriko fa mbola manan-kery mandrakariva (ary na any @ ireo firnena mandroso aza dia mifameno ny boky taratasy sy ny boky dijitaly na "numérique" toy itony).
hery - 11/08/2014 09:49
Izaho kosa aloha mieritreritra hoe tsy voatery hitovy daholo ny fahafahan'ny sekoly rehetra manerana an'i Madagasikara. Ary tsy tokony hiandry an'izany hitovy vao hiditra amin'ny fandrosoana.
Inoako fa tsy ny any Allemagne rehetra no manana arak'izay lazain'i Rtoa fa nanomboka tsikelikely.
Io fiezahana hanana fitoviana "uniformité" isam-paritra io ihany no tsy mampandroso matetika nefa samy manana ny haren-tsainy, ny zavatra manavanana azy, ny fombafombany ny faritra tsirairay.